Oké Osimiri Tethys: mmalite, njirimara, mmalite na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ọtụtụ isiokwu metụtara geological oge anyị akpọwo aha ọtụtụ ugboro Oke Osimiri Thetis. Ọ bụ oké osimiri nke mechiri obodo Cabra, obodo a bụ ebe kachasị amasị ndị ọkachamara. Na, n’oge ochie, etinyere mpaghara a dum na mmiri a maara dịka Oke Osimiri Tethys ma ọ bụ Osimiri Tethys. O bu nnukwu mmiri na ebe an’eji ebi ndu nke g’etu akuko na ala nke mbara ala anyi.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị gbasara njirimara na mkpa niile nke oke osimiri Tethys.
1 Akụkọ banyere oké osimiri Tethys
2 Mgbanwe nke oké osimiri Tethys
3 Mmiri anụmanụ
4 Kedu aha?
Akụkọ banyere oké osimiri Tethys
Oké Osimiri Thetis bụ nnukwu mmiri nke ihe ruru ka Asia. Ọ kpụrụ ihe dị ka ihe dịka afọ 250 gara aga mgbe kọntinenti nile nke ụwa jikọtara n'otu nnukwu kọntinent nke aha Pangea maara. Ikwesiri ima na nnukwu ala a ka emebere ma nwee ọdịdị C. N'oge ahụ Oké Osimiri Tethys bụ mmiri nke na-adịgide n'ime kọntinent ahụ ma gbaa ya gburugburu n'akụkụ atọ. Ọ bụ oke osimiri nke nwere njirimara mmiri na-ekpo ọkụ ma dị omimi. Agbanyeghị, ọ bụ ihe jupụtara n'okike, mmiri, coral nwere agba dị iche iche, agwaetiti ndị ọzọ, wdg.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwu na Oké Osimiri Thetis bụ nnukwu mmiri nke jupụtara na anụmanụ na ndụ osisi yana na ọ ga-abụrịrị ama ama ma ọ bụrụ na ọ dị ebe ahụ taa. Ndi a bu oke anumanu di iche iche nke oke osimiri a tinyere na otutu ihe e kere eke biri n'ime oke osimiri a ka echekwara ha taa. A ga-ahụ ihe ndị a niile na Jurassic Cabra Interpretation Center. Ebe a dị ka ịgagharị na mbụ ma nwee ike ịhụ ụdị ndụ dị iche iche dị n'oké osimiri a.
Anyị maara na Oké Osimiri Thetis bụ ime ime nnukwu ala, mana mmiri gbara gburugburu mputa. Na nke a A na-akpọ oké osimiri Panthalassa ọ bụkwa ihe a maara taa dịka Oke Osimiri Pasifik. Enwere ọtụtụ ndị kwenyere na Oke Osimiri Pasifik adịghị ka o yiri, mana anyị ga-amarịrị na ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke elu ụwa dum.
Mgbanwe nke oké osimiri Tethys
Anyị maara na n'ihi convection ugbu a nke Earth mantle e nwere ije nke tectonic efere mara dị ka Mgbagharị kọntinent. Ọnọdụ a dị na kọntinent mere ka mgbaji nke nnukwu kọntinent Pangea na nkewa na nchụpụ nke efere nke kọntinent site na oke oke osimiri. Anyi aghaghi ima na Osimiri Mediterenian malitere site na nnukwu oke osimiri nke Thetis. Otutu ihe di iche iche di iche iche nke di n’osimiri Mediterenian sitere na Osimiri Tethys. Otú ọ dị, Ọ bụghị otu Oké Osimiri Mediterenian ka anyị maara taa, Kama nke ahụ, ọ bụ mmiri jupụtara na mpaghara Iberian Peninsula na Europe, nke oge ahụ abụghị naanị agwaetiti nke agwaetiti.
N’ebe anumanu nile, osisi na akuku mmiri di n’osimiri Mediterenian oge ochie, amaghi ihe mere rue mgbe sayensi choputara ya. Ọ bụkwa ya bụ na Oké Osimiri Mediterenian takọrọ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dị ịtụnanya, ọ dị adị n'ezie. Ihicha a nke Oké Osimiri Mediterenian mere n'ihi mmegharị nke efere tectonic. Efere ndị a na-emechi ụgbụ mmiri Rifeño na Betic, bụ naanị ebe mmiri si na Atlantic nwere ike ịbanye n'Oké Osimiri Tethys. Maka nke a, oke osimiri a niile nke Mediterenian nke anyị maara taa ghọrọ nnukwu ọzara nnu ọcha. Nnu a nile bụ ihe dị na mmiri agbaze. Oge a na mmepe nke ụwa na oge ala a maara ya dị ka Nsogbu Salin nke Mesaịa. Ihe omume a pụrụ iche, yana okporo ụzọ, mepụtara mkpokọta mkpochapụ nke ndụ mmiri niile.
Ka oge na-aga, ọtụtụ narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, Ọwara Gibraltar meghere, Mediterenian na-ejupụtakwa ọzọ na mmiri site na Oké Osimiri Atlantic. Ọ bụ n'oge a ebe e guzobere Oké Osimiri Mediterenian na anyị maara n'oge anyị weere dị ka nwa nke Oké Osimiri oge ochie nke Thetis.
Anyị ga-amata ụdị mmiri mmiri dị na Osimiri Tethys n'oge ahụ. Ihe dị ka nde 50 afọ gara aga, anụ ọhịa mbụ malitere. Ndị Cetaceans bụ anụmanụ mbụ nwere ike imeghari n'ụzọ zuru oke na ndụ mmiri. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị ịtụnanya banyere mmalite nke ụdị na taa Ha gụnyere ọtụtụ ụdị na-ekesa n'oké osimiri ụwa. Oke osimiri Tethys agagh adata. Ọ bụkwa ebe ọtụtụ puku ụdị anụ mmiri na-akpụ akpụ dị iche iche bi na mmiri gbara gburugburu na mmiri na-emighị emi. Ka anyị hụ ụfọdụ ụdị:
Onye na-egbochi Proysterpheus
Sauroptery onye ọwụwa anyanwụ
A maara na obodo Cabra na Geopark nke dị na Subbética bụbu ebe obibi nke ihe ndị a niile dị na mmiri.
Enwere ọtụtụ ndị na-ajụ ihe kpatara akpọrọ oke osimiri a. Eduard Suess bụ onye ama ama n’onwe ya n’obodo Austria bụ onye nwere mmasị na mbara ụwa. Site na afọ 44 ọ malitere ịmụ tectonics dị omimi ma bipụta akwụkwọ Die Enststehung der Alpen. N’akwụkwọ a egosiri na ọ bụ ngagharị ndị na-agọnahụ ụwa mebere ugwu ndị ahụ, na-emegide ihe echere n’oge ahụ.
Edward Suess na-aga n'ihu na-amụ banyere ala ruo mgbe ọ gbara afọ 62, ebe ọ tụrụ ndị sayensị ọzọ n'anya ka ọ chọpụtara nke ahụ fosili ndị ahụ a chọtara n’ugwu bụ n’ezie anụ mmiri. Nihi nka, odi nkpa ka enwe miri buru ya baptism nke aha osimiri nke Thetis.
Aha nke Thetis sitere na titan na mmiri sitere na ya nke onye geologist mere baptism nke oke osimiri a na aha a.
Mana site na ndị ọhụrụ e hiwere ha nwere ike ịmụtakwu banyere oke osimiri Tethys, njirimara ya na mgbanwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Thetis